Iindaba -Abanye abantu bayangqinelana kunye, abanye abantu bayayitshintsha itafile, kodwa lo ngumdlalo webhodi onyanisekileyo.
Ngo-2019, Ngaba ubhengeze izicwangciso zokukhulula "Uxolo lukaPamir: uHlelo lwesiBini" kumaqonga ohlukeneyo oluntu. Kwindlela yokunxibelelana nomyalezo, umnxibelelanisi wambuza ngembeko ukuba unazo naziphi na izicwangciso zokushicilela kwakhona “Inkampani kaJohn". Waphendula wathi, “Ngenye imini. Kodwa keNgaba kuthabatha iminyaka emibini ubuncinci kamva. ”
Ngo-Epreli 2021, "Inkampani kaJohn: Ushicilelo lwesiBini ”ungene ngokusemthethweni kwicandelo lombono lomdlali. Umdlalo ufikelele ngokukhawuleza phezulu kwiitshathi zeBGG kunye neKS. Nge-21 ka-Epreli, ukubuyiselwa kwemali komdlalo kwaphela. Umdlalo ufumene abantu abangama-9,150 bebonke kunye ne-787,216 yeedola zaseMelika ukuxhasa. Ngenxa yesi siphumo,Ngaba wothuka kakhulu kwaye waneliseka. Kodwa eyona nto ayikhathaleleyo ibonakala ngathi kukulandela umkhondo kwimbali.
"I-KS liqonga elihle kakhulu"
Ebusuku, Ngaba isasebenza kwindawo yomyalezo we-KS, iphendula imibuzo ephakanyiswe ngabanxibelelanisi ngokunyanisekileyo nangokunyanisekileyo.
Yi le NgabaIsimo sengqondo esiqhelekileyo. Akaze enze into ngomsebenzi wakhe, mhlawumbi ngenxa yobungcali bakhe njengomphandi wembali.
Inkampani kaJohn ayiyo NgabaUmdlalo wokuqala kwi KS. Namhlanje,Ngaba uye waba ngumyili weenkwenkwezi kolu shishino. Xa kuthelekiswa no "Pamir Peace: Second Edition",Inkampani kaJohn Unemali ephezulu yokubuyiselwa kwemali kunye nenani elikhulu labantu abaxhasayo.
Ngophuhliso lwemidlalo yebhodi eya isiba ngokulinganayo nangakumbi, umgangatho webhodi yebhodi uxhomekeke kuqala kumshicileli kunye nomyili womdlalo: umpapashi umele umgangatho wemveliso, kwaye umyili umela umgangatho womdlalo.
UCole Wehrle, ngubani oyile Pamir Uxolo kwaye UMaolin Yuanji, iye yakhelwe uphawu lwegolide, ekwabizwa ngokuba yi Ngaba Iziphumo. Oku kuthetha ukuba nanini na xa umdlalo uyilelweNgaba phuma, bantu Ngaba hlanya “thenga, thenga, thenga”. Iqale nini le nto?Ngaba Ndacinga okwexeshana, kodwa kubonakala ngathi wayengazi.
“Nangona kuyinxalenye yentengiso yethu. Kodwa ndicinga ukuba ukuba neqela eliphambili labalandeli yinto entle. Kodwa xa ndabona idatha yokuphela komva kwi-KS, ndaye ndothuswa linani labantu abaxhasayoInkampani kaJohn, ndingazi nto ngayo, ngenxa nje yegama lam. Ke, ndicinga ukuba esi sesinye sezizathu zokuba iKickstarter iphumelele. Inceda kakhulu ukwandisa ababukeli abatsha. ”
Yintoni i Inkampani kaJohn
Inkampani kaJohn ngumdlalo webhokisi yesanti eyilwe ngu Ngaba malunga nolawulo lwenkampani yokulinganisa. Kumdlalo, abadlali badlala indima yosapho lweInkampani kaJohn (Inkampani yase-East India), belingisa ukusebenza kweNkampani ye-East India eMumbai, Bangladesh kunye nezinye iindawo ngenkulungwane ye-18 neye-19, kubandakanya urhwebo, ubundlongondlongo, njalo njalo.
Umdlalo wahlulwe wabangamaxwebhu amathandathu, i-K1-K6. Umyalelo yile: incwadi yokufundisa, incwadi epheleleyo, incwadi ye-antitrust, incwadi emfutshane epheleleyo, incwadi yokubhengezwa kunye nencwadi yomntu ongatshatanga.
Obu buchule bokubambisana kunye nomdlalo wokungqubana onokwenzeka uxhomekeke kubuchule bothethathethwano bomdlali. Ikwayindlela yokusebenza engundoqo leyoNgaba uhlala ethetha ngewebhusayithi. Kuthiwa abantu abadlale lo mdlalo badinwe yimilomo yomdlalo. Umdlalo "uvule kakhulu" kuba ifuthe olidlalayo nabantu abahlukileyo lahluke ngokupheleleyo.
Umdlalo Ngaba ube yeyona nkampani inkulu kwezorhwebo emhlabeni phantsi kolawulo lwakho kwaye uqonde amabhongo oBukhosi baseBritane, kodwa ukuba awudlali kakuhle, Ngaba usilele.
Ngomhla we-4 ku-Matshi, ngo-2021, kwakamsinya phambi kokumiselwa kwe John, Inc .: uHlelo lwesiBini , Ngaba uthumele ilog yoyilo kwiwebhusayithi yakhe, Wehrlegig Imidlalo.
Ukujikeleza i2018, ukuze uyilo olungcono Uxolo lwePamir 2, Ngaba kunye nomntakwabo uAndrew (Drew) ugcino lwezindlu, waseka i Wehrlegig Imidlalo. UDrew wayenoxanduva lokuvavanya umdlalo kunye nophuhliso, ngelixa uCole ejongene noyilo loyilo, ubugcisa kunye nemithetho. Kungekudala emva kokugqibaUPamir 2, baqala ukusebenza John, Inc .: uHlelo lwesiBini.
Inkampani kaJohn, ekwabizwa ngokuba yiNkampani ye-East India, yinto ehlekisayo UJohn Bull. Inkampani kaJohn - ngaphakathi NgabaUluvo, yile nto ibiyiyo umdlalo, inkampani eqhuba ishishini kunokuba ibe yimbali yosapho.
Imperialism ayiyonto enkulu, kodwa yenziwe ngamabhongo amancinci amaninzi ayadibana. Kwaye, kumdlalo wezopolitiko nezoqoqosho, igama le-anthropomorphic libonakala lilula ukulikhumbula.
Ngelo xesha, Inkampani kaJohn 2 inenqanaba leBGG elingu-8.0 ngaphambi kokuba umdlalo ufikelele nasezandleni zabadlali.
Uhlobo lokuqala VS uHlelo lwesiBini
Olunye lotshintsho lokuqala kwi Inkampani kaJohn 2 yayikukunyusa indawo yothethathethwano kumdlalo. Ndifuna ukunika abadlali izixhobo ezingaphezulu ukuze bathethathethane ngezixhobo zokutshintsha. Ngaba okhankanyiweyo.
Kodwa, ukwandisa indawo yothethathethwano kuyingxaki enzima kakhulu. NgokungafaniyoUPamir, Cole Ugqibe ekubeni abeke uthethathethwano entliziyweni yoyilo lwakhe Inkampani kaJohn 1. ”Lo mthetho ubaluleke kakhulu. Xa besisebenza kuguqulelo olutsha, ndenze konke okusemandleni am njengomphuhlisi ukuqinisekisa ukuba izinto zomdlalo zihlala zifana nohlobo lokuqala. ”
Ukongeza kuhlaziyo lwenkqubo endala yezithembiso (izinto ezinomdlali zinokutshintshwa nangaliphi na ixesha) kunye nenkqubo yomsitho, Ngaba Utshintshile izinto ezinje ngamakhadi ezithembiso kunye neemephu ukwenza umdlalo ubelula kwaye ube lula.
Hlaziya inkqubo yomsitho
“Ngeli xesha ndandidlala iRiphabliki yaseRoma, ndandinomdla wokulula komdlalo. Emva kwexesha, xa ndandiyila uJohn, Inc., ndaye ndagqiba kwelokuba ndisebenzise inkqubo yomsitho. Le nkqubo inokulandelwa emva kwimidlalo yemfazwe apho ingingqi nganye ineseti yeziganeko zokuziphatha.
Ezi ndlela zokuziphatha Ngaba ziyahluka ngokwemo yezoqoqosho nezopolitiko zommandla. Umdlali angaqengqa idayisi aze asombulule imicimbi edweliswe kwitheyibhile efanelekileyo. ”
Kucacile ukuba Inkampani kaJohnUbeko lwayo luye lwenziwa kugqithiso olukhulu. Kwinguqulelo entsha,Ngaba uhambise indawo yomdlali ekhohlo kwaye wabeka ingxelo eyandisiweyo yeIndiya kwicala lasekunene lemephu.
Ngemephu, yiyo Ngaba kube lula kakhulu ukuhamba phakathi kweenkqubo zomnyhadala. Olu tshintsho alugcini ngokugcina iinkcukacha zenguqulo yokuqala, kodwa lukwacebisa imbonakalo.
Ekugqibeleni, Ngaba setha inkqubo elula. I-odolo nganye kwinkqubo ibeka inqanawa, isenza ukuba inkampani ibe yinzuzo. Inkqubo endala ye-boom / bust yoqoqosho yathathelwa indawo yinkqubo edibanisa ibhalansi yorhwebo kunye nenqanaba lezoqoqosho kwaye inokuvala kwaye ivule ii-odolo ngokusekwe kwiminyhadala e-India.
Imperialism kunye neColonialism
Ngaba waphumelela kwiDyunivesithi yaseTexas eAustin. Ngexesha lesidanga senkosi yakhe, uphando lwakhe lwalugxile kwimibongo yesiNgesi ngenkulungwane ye-18, ezinje ngenkolo kunye nemibongo ekuqaleni kweNguquko kwiMizi-mveliso. Ngexesha lakhe le-PhD, wafunda nefuthe le-impiriyalizim kwiincwadi zamanoveli.
“Xa abadlali bedlala Pamir Uxolo okokuqala, abantu banezimvo ezifanayo: umdlalo uyinto encinci. Olu luphononongo olulungileyo, olubonisa umahluko phakathi komdlali nesethingi yomdlalo. ”Ngaba usixelele.
Kodwa Inkampani kaJohn yahlukile. Lo mdlalo ubandakanya ngokuthe ngqo ukuyilwa kunye nophuhliso lwegamaImagical Imagination. Isizwe, ingingqi okanye ilizwe kufuneka lizijonge njani kunye nehlabathi elihlala kulo? Olu luvo lubalulekile kuba lusivumela ukuba siyiqonde ngcono indlela eziziphatha ngayo ezi ntlanga okanye la mazwe.
“Ubukoloniyali yingcamango entsonkothileyo. Andinakulibazisa ukuchaza isenzo seBritish East India "Inkampani kwinkulungwane ye-18 njengamakoloniyali. Uninzi lwabo ngoosomashishini kwaye abanamdla wokwakha ubukhosi okanye ukuhlala eIndiya. Ngamanye amagama, abathathi nxaxheba kwezopolitiko. Ngokwesiqhelo, benza imali kwaye bagoduke abantu abadala (ungakuqonda oku kumdlalo). Oku kwahlukile kubukoloniyali bamazwe aseBritane nawaseMelika kwiikoloni zokwenyani. Indlela elandelelana ngayo eli hlabathi inxulumene ngokusondeleyo neengcamango zekoloniyalizim ezicingwa ngumntu wonke. ”
Ngandlela thile, Inkampani kaJohn ichaze nokuba zibekwa njani na ezi siseko. Ngumdlalo ongqongqo ngokuchasene nobukoloniyali.
Ngaba sikwakhankanyiwe, “Kule minyaka ingama-30 idlulileyo, i-Bhritane ibibanjwe kukuphambana komkhosi wobukumkani. Abanye ababhali-mbali bade basebenzise amabala angaboniyo kwimbali yabantu ukwenza ingxabano. Ke,Inkampani kaJohn: UHlelo lwesiBini yabakho. Lo ngumfanekiso ongavumelekanga ovumela abadlali ukuba bazibonele ngokwabo ubukhosi. Ewe ayisiyiyo kuphela indlela yokuqonda impiriyali, kodwa ndiyathemba ukuba ingabanceda abantu baqonde imbali. ”
Nangona lo mdlalo ungakhange ukhutshwe e-China, kusekho iqela labadlali abaye baguqula imigaqo yamaTshayina yalo mdlalo ngu Uthando lokuvelisa amandla, kwaye abadlali abaninzi baye badlala lo msebenzi wobugcisa. Xa ndivakalisa uthando lwabadlali baseTshayina kunye nokugxeka kwabo "ukungafihli"Ngaba, wayenemincili kakhulu.
“Ndonwabe nyhani ukuva olu hlobo lovavanyo! Ndiyathanda ukuyila imidlalo "evulekileyo". Kuba olu hlobo lomdlalo lunokudlala amaqhinga ahlukeneyo, abadlali abahlukeneyo banokudlala iziphumo ezahlukeneyo. Nangona oku kungakhokelela ekuPhakamiseni itafile, kodwa abadlali banokuthatha inxaxheba eyakhayo kumdlalo. Lo ngumdlalo onokuqhuba phantsi kwazo naziphi na iimeko, njengembali. Imbali ngumlambo omde, kwaye zininzi izinto ezinokuvulwa kuwo. Ukwenza abantu abaninzi bathandane nemidlalo yezembali, injongo yam iphumelele. "
Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Idayisi yesiNtu, Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni, Amalaphu Umdlalo weBhodi, Ikhadi lemikhono, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo,